Harry laurent Rahajason - MLE : Efa lasa mpanao politika -
AccueilSongandinaHarry laurent Rahajason – MLE : Efa lasa mpanao politika
Harry laurent Rahajason – MLE : Efa lasa mpanao politika
Namaly avy hatrany ny MLE izay nilaza fa tsy hanatrika ilay fampivondronana hoentina hanovana ireo andininy mampisavorovoro anatin’ny lalana mifehy ny serasera ny minisitra Harry Laurent Rahajason « Rehefa tsy handray anjara ny MLE tsy terena tsy vozonana, tsy maninona” . Ho azy dia te-hanao didy jadona ity fikambanan’ny mpanao gazety milaza ho miady amin’ny fahalalahan’ny asa fanaovan-gazety ity « lasa didy jadona ny ataon’ny MLE hoe amin’ izay itiavany azy ihany no hanaovana ilay lalàna mifehy ny serasera, tsy mety izany. Lazaina foana hoe ny fanjakana no manao io didy jadona io nefa dia mibaribary izao fa ry zareo no tena manao ny jadona”. Eo amin’ny sehatra asa misy eto Madagasikara, hoy ny minisitra dia “manana tombony ny mpanao gazety hoe tsy gadraina raha toa ka misy ny tsy mety amin’ny asa tanterahina, nefa izany dia lazain’ny MLE ho tsy ampy. Takian’ny MLE ireo izany dia ny hoe tsy asiana ve ny lalàna ary samy manao izay tiany ny rehetra , nandray ohatra mihitsy ny minisitra tamin’ izany”. Ny olona noana koa ve izany raha mangalatra akoho dia miteny hoe anaovy lalàna izahay mba tsy hogadraina nefa nangalatra akoho ?.
Misy ny vaovao izay miendrika fanalam-baraka amin’ izao fotoana izao hoy ny ministry ny serasera, izay nanala baraka ny filohan’ny antenimieran- doholona milaza fa « misy ny trano rihana dimy natsangan’ity filohana andrim-panjakana ity, dia misy ny mivezivezy maka vola ao aminy” tsy asa fanaovan-gazety izany, fa tsy manao recoupement dia mamoaka vaovao tsy marina dia ianao indray avy eo no hi laza hoe voahitsakitsaka ny fahalalahana. Fahalalahana ve hanevatevana olona ilazana vaovao tsy marina ?”.
Mikasika kosa indray ny fakan-tahaka ataon’ny MLE, ny fandaharana izay vokarin’ny filoham-pirenena amin’ny tambazotra serasera, dia nilaza ny ministry ny serasera fa “ tsy manana endrika politika ve izany”. Maninona, hoy izy ny fikambanana mpanao gazety no manao izany,” inona ihany koa no tsy hivadian’ny MLE fikambanana politika raha mba hamokatra fandaharana tahaka ny fotoam-bita“. Tsy nitsitsy fitenenana moa ny minisitra manoloana ireo mpanao gazety izay tompona haino aman-jery, fa misy ireo orinasa izay manome karama vary masaka ny mpiasa ao aminy dia ny mpanao gazety izany. Hivoaka tsy ho ela ihany koa, hoy izy, ny didy fampiharana mikasika ny mombamomba io karaman’ny mpanao gazety io , ka tsy maintsy arahin’ny orinasa izany.
Haharitra roa andro ny dinika teo amin’ny governemanta Malagasy izay notarihin’ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ny governemanta Alemana izay nisoloan’ny ambasadaoro Harald Gehrig tena izay natao teny amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo. Fihaonana ho fanamafisana ny ...Tohiny